Ekwela mgbe ihe ghazuru gi isi gi ma ghara ikwe ka ọdịda gha abia gi n’obi. - Ziad K. Abdelnour - Kwuru Pedia
Ndụ na-abịa. Anyị niile nwere njem pụrụ iche nke na-eme ka anyị ruo ebe dị iche iche. N’agbanyeghi na ndu anyi di iche, odi otutu ụkpụrụ di n’okpuru nke anyi nile metụtara. Anyị niile na-eme nke ọma n’otu oge, anyị niile na-enwetakwa ọdịda.
N’agbanyeghi n’otutu okwu anyi si di iche iche, anyi niile n’enwe obi uto mgbe anyi na eme nke oma na nwute mgbe anyi dara. Ọ bụ ihe dị mma ịnwe mmetụta ndị a mana ihe dị mkpa ka anyị ghọta bụ ókè anyị kwere ka mmetụta ndị a metụta anyị.
Mgbe anyị mechara nke ọma, anyị na-anya isi na onwe anyị, ma anyị na-efukarị ịdị umeala n’obi anyị. Anyị nwere ike iche na anyị karịrị ndị ọzọ niile, ndị ọzọ nọ n'okpuru anyị. Suchdị omume ndị a na-emebi agwa anyị, anyị agaghịkwa asọpụrụ usoro a.
Mgbe ịga nke ọma, anyị kwesịrị ịdị obi umeala ma nwee ekele nye ndị niile nyeere anyị aka iru ebe anyị nọ. Anyị kwesịrị inwe ekele na anyị nwere ike ịnọ ebe anyị nọ taa. Ozugbo anyị kwere ka ihe ịga nke ọma anyị ruo anyị n'isi, ọdịda anyị ga-amalite.
Ọ dị anyị ka o nweghị ihe ga-emetụ anyị aka, anyị na-agbada ndị nche. Anyị anaghị arụ ọrụ ike dịka nke mpako na nleghara anya a; otu na-echefu na ha mezuru.
N'otu aka ahụ, mgbe odighi eme, anyị agaghị ata onwe anyị ụta nke ukwuu nke na anyị nwere nkụda mmụọ ịga n'ihu. Anyị ga-enwerịrị ọdịda dị ka ihe nkuzi wee mụta ya. Ọ na-enyere anyị aka ịnagide ma lekọta ọnọdụ n'ọdịnihu n'ọdịnihu n'ụzọ ka mma.
Ihe Egosiputa Ihe Oku
Akwa Quotes banyere ihe ịga nke ọma
Ọ dịghị mgbe Quot
Imeri Quotes Falopure Quotes
Nhota nke Oganiru Na Odida
Nhota gbasara odida
Otu banyere obi na uche
Nkwupụta Banyere ccessga nke Ọma
Okwu banyere oganihu na odida
Chọọ nkwanye ùgwù, ọ bụghị ntị. Ọ na-adịgide karịa. - Ziad K. Abdelnour
Ọ dị mkpa ịghọta na mmadụ agaghị enweta ogo dị na ndụ naanị site na njimara dọtara ma ọ bụ…
Onye ọ bụla nke na-anwa iweda gị ala nọlarị n'okpuru gị. - Ziad K. Abdelnour
Will ga - achọta ọtụtụ mmadụ na ndụ gị ga - anọgide na - ekpe gị ikpe maka ihe ọ bụla…
Kwe nkwa mgbe ị nwere obi ụtọ. Adaghachila mgbe iwe were gị. Ekpekwala mgbe obi na-ajọ gị njọ. - Ziad K. Abdelnour
Kwe nkwa mgbe ị nwere obi ụtọ. Adaghachila mgbe iwe were gị. Ekpekwala mgbe obi na-ajọ gị njọ. - Siad…